स्वास्थ्य Archives » Nepal Europe News
NepalEurop September 27, 2016 September 27, 2016 समाचार, स्वास्थ्य	0
आश्विन ११, २०७३- स्वास्थ्य मन्त्रालयले मुलुकका सबै सरकारी स्वास्थ्य निकायको बहिरंग सेवा (ओपीडी) बिहान १० देखि साँझ ५ बजेसम्म खुल्ला राख्न परिपत्र जारी गरेको छ । यसअघि धेरैजसो अस्पतालका ओपीडी बिहान १० देखि २ बजेसम्म मात्र सञ्चालन हुने गरेको थियो । स्वास्थ्य सेवा विभागकी महानिर्देशक डा.पुष्पा चौधरीले स्वास्थ्य निकायमा पुग्ने व्यक्तिले
डा. केसीले सुरु गरे फेरी आर्को नवौं अनसन !
NepalEurop September 26, 2016 Feature News, समाचार, स्वास्थ्य	0
आश्विन १०, २०७३- चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै पटक पटक अनसन बसेका त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्रा.डा. गोविन्द केसीले नवौंपटक अनसन सुरु गरेका छन् । सरकारलाई दिएको अल्टिमेटममा पनि माग पूरा नभएको भन्दै केसीले सोमबार शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अनसनको घोषणा गरेका हुन् । डा. केसीले दिउँसो ४ बजेदेखि अनसन
वीर अस्पताल पुगेर मन्त्री गगन थापाले के–के गरे ?
NepalEurop September 2, 2016 Feature News, समाचार, स्वास्थ्य	0
काठमाडौं, भदौ १७ । तस्बिर ईमेज मन्त्रीको जिम्मेवारी लिएपछि अस्पतालहरुको अनुगमन गर्ने नेपालका स्वास्थ्यमन्त्रीको पुरानै चलन हो । यही परम्परालाई निरन्तार दिएका छन्, नवनियुक्त स्वास्थयमन्त्री गगन थापाले पनि । मन्त्री बनेको एक सातापछि स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा विहीबार मुलुककै पुरानो वीर अस्पतालका विभिन्न विभागमा पुगे र कर्मचारीहरुलाई मनग्गे निर्देशन पनि दिए । राजधानीको वीर अस्पतालको वातावरण
हुम्लामा उपचार नपाएर दुई दूधे बालिकाको मृत्यु
NepalEurop August 27, 2016 Feature News, समाचार, स्वास्थ्य	0
हुम्ला, भदौ १२ । हुम्लाको मध्यभेगमा पर्ने रोडिकोट गाविसस्थित स्वास्थ्यचौकीमा उपचार सेवा नपाएर दुई दूधेबालिकाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा रोडिकोट–८ का राजबहादुर कार्कीको आठ महिनाको छोरी सुशीला र सोही ठाउँ बस्ने अंगत कार्कीको दुई महिनाको छोरी सुस्मिता रहेका छन् । ती दुबैजनाको निमोनिया र ज्वरोका कारण मृत्यु भएको हो । सो